I-Eagle Bay Beach Retreat - I-Airbnb
I-Eagle Bay Beach Retreat
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Exclusiveescapes
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Exclusiveescapes izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Eagle Bay General Store endala manje isiyi-Luxurious Holiday Villa emangalisayo.
I-villa kanokusho enechibi langasese Itholakala maqondana ne-Eagle Bay Beach edumile, lo mbhede ovulekile ohleliwe ongu-3, indawo yokugezela emi-3, izitini ezinikeziwe, i-villa yezinga eliphansi ingenye yezindawo zikanokusho ezitholakalayo.
I-villa ibekwe endaweni ethule kakhulu emahlathini maqondana nolwandle, ingamakhilomitha ayi-7 kuphela ukuya eDolobheni laseDunsborough futhi imizuzu embalwa nje ukusuka eWise Winery nase-Eagle Bay Brewery. Le ndawo yinhle kakhulu futhi ihlanganisa izindawo ezikhangayo ezinjengamabhishi, izindawo zokuthengisa iwayini, izindawo zokuphuza utshwala, izindawo zemibukiso yezobuciko nezinye izinto eziningi ezikhangayo uMargaret River okufanele azinikeze.
Le villa evulekile ehlukile ehleliwe, ebheke enyakatho iyindawo yamaholide kanokusho yamaphupho elungele ukubaleka kwezothando noma umndeni. Kunamakamelo okulala ayi-2 master anemibhede ye-King size womabili anamagumbi okugeza angasese e-ensuite. Okunamathiselwe kule villa kubuye kube negumbi lokuhlala elihlukile le-studio elinezindlu ezingashadile ezingu-2x kanye ne-en-suite yangasese.
Le villa ifakwe impahla yekhwalithi ephezulu, ukufinyelela ku-inthanethi ye-NBN, ine-air-conditioner ebuyela emuva ukuze ifudumale futhi ipholise, inekhishi elihlome ngokuphelele elinezitsha zokupheka, izitsha, okokusika nomshini wekhofi.
Thatha uhambo ekuphumeni kwelanga noma ekushoneni kwelanga, phansi ogwini lwe-Eagle Bay Beach etholakala ngqo ngaphesheya kwe-villa nayo elungele izinja!
Lesi sakhiwo sivalelwe ngokugcwele ukuze ube nokuthula kwengqondo nokuphepha.
Isikhwama sezinkuni esitholakala kuhhavini we-pizza sinikezwe.
Igalaji alitholakali ekufinyeleleni kwesivakashi.
Kunamakhamera angaphandle kule ndawo ngezinjongo zokuphepha.
Sicela uqaphele: Lesi sakhiwo sihlanganisa yonke ilineni namathawula.
Abashiye Isikole: Asikwamukeli ukubhukha kwabashiye isikole nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
I-Exclusive Escapes ikufisela iholidi elijabulisayo kodwa futhi siyakucela ukuthi ubonise ukucabangela komakhelwane ngokuphathelene nomsindo, ikakhulukazi ngemva kwamahora ka-10pm.
Imithetho yomkhandlu ivumela ukuthi amakhaya amaholide aqashiswe ngezinhloso zokuhlala kuphela hhayi njengendawo yokusebenzela isb. ephathini noma emshadweni. Imisebenzi nemibuthano ayivunyelwe futhi, uma kufakazelwa izovalwa ngokushesha.
Sicela uqaphele ukuthi izikhalazo zomsindo ziwukwephulwa kwemigomo nemibandela yethu futhi kungase kuholele ekuphucweni ibhondi yakho kanye/noma ukukhishwa ngokushesha endaweni.